Jijjiiramni Oromiyaa keessatti dhufaa jiru qabsoo ummata Oromootiin waan argameef kunuunfamuu qaba. – Oromedia
Home » Oduu » Jijjiiramni Oromiyaa keessatti dhufaa jiru qabsoo ummata Oromootiin waan argameef kunuunfamuu qaba.
(Oromedia, 13 Amajjii 2019) Miseensoti Konyaa ABO Victoria Amajjii 13 bara 2019 marii bal’aa haala yeroo irratti gaggeessaniin abbaan jijjiirama yeroo ammaa ummata Oromoo, umattoota cunqurfamoo fi qabsaa’ota Oromoo, keessayyuu ABO fi Qeer roo bilisummaa Oromoo ta’uu hubachiisan.
Keessyyuu qabsoon Oromoo ABOn durfamu jijjiirama ammaa fiduu keessatti gahee olaanaa akka gumaache marii kana irratti ka’eera. Kanaaf, Jijjiirama dhiigaa fi lafee gootota Oromootiin argame kanas waa hunda caalaa tiksuun barbaachisaa ta’uu himan.
Akka hirmaatonni dubbatanitti, Jijjiiramicha kan milkeesse keessaa tokko waliigaltee Asmaraatti ABO fi mootummaa Itoophiyaa gidduutt waltahamee ture. Walgaltiin kunis qabsoo qawween gaggeeffamaa ture, gara qabsoo siyaasaatti jijjiireera.
Haata’utii, adeemsi ce’umsa qawwee irraa gara siyaasaatti godhamu yeroo ammaa kana danqaa keessa seenee jira. Kun immoo akka miseensoti ABO ibsanitti, yaaddoo guddaa Oromiyaa ta’eera.
Waldhabdeen waliigalticha hojii irra oolchuu gubbaatti mudates, akkuma mariin eegalame, mariin akka furamuu qabu miseensoti ABO ejjannoo isaanii ibsaniiru.
WBO ittiisa ummata Oromoo ta’uun barootaaf wareegama baasaa jiruufis kabajaan qabsaa’ummaa kennamuufii akka qabu hirmaattooni kun eeranii, sirni WBO gara caasaa nageenyaatti jijjiiruus kabajaa fi sirnaan gaggeeffamuu akka qabu miseensoti ABO dhaamaniiru.
Miseensoti ABO, kaayyoon ABO akka milkaa’u karaa hundaan deeggarsa isaanii akka itti fufanis sagalee tokkoon hubachiisaniiru.
Addatti immoo, waliigalitee nagayaa ABO fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti taasifame gufachiisuuf shiroonni karaa hundaan xaxaman, lollii fi ololli gaggeeffaman marti dhaabbachuu akka qaban jabeessanii dhaamaniiru.
Miseensoti ABO Konyaa Victoria marii kana irratti haala waldhabdee kanaan dadhachuunis saamicha Oromiyaa keessatti qaamota hin beekamneen gaggeeffamaa jirus balaaleffataniiru; qaamoti waldhabdee babal’isanis gochaa Oromoo miidhu kamirraa oyyuu akka dhaabbatan waamicha godhaniiru.
Dhuma irrattis, murannoo qabsoo Oromoo milkeessuuf qaban kan ibsu ejjannoo baafatan keessatti haleellaa waraaaa, dhiitinsa mirga namoomaa fi gufatiinsa qabsoo siyaasaa Oromiyaa keessatti bal’inaan adeemsifamaa jiru dhaabuuf karaa hundaan dhiibban godhamuu akka qabu waamicha dhiheessaniiru.
Previous: Advocacy for Oromian iyyannaa nagaa fi araara Oromiyaa dhiheesse
Next: Ibsa ejjannoo: Obsaa fi cichomina dhaabni keenya ABO agarsiiseefis jaalalaa fi kabajaa guddaa qabna